Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ukutya khumbula isilumkiso soVuyo lweVegie yeHlabathi yeBrand
IGlobal Vegetarian Foods Corp ikhumbula uphawu olonwabileyo lweVeggie World brand Vege Chicken Breast kunye neVegefarm brand Vege Stewed Lamb Chunk evela kwindawo yentengiso kuba zinokuba neqanda elingabhengezwanga kwileyibhile. Abantu abanokungabikho komzimba kwiqanda akufuneki batye iimveliso ezikhunjulwayo ezichazwe ngezantsi.
Isilumkiso sokukhumbula ukutya esikhutshwe nge-14 ka-Okthobha ka-2021, sihlaziyiwe ukubandakanya ulwazi olongezelelekileyo lokuhambisa. Olu lwazi longezelelekileyo lwachongwa ngexesha le-Arhente yokuHlolwa kokutya eKhanada (i-CFIA) yophando ngokhuseleko lokutya.
Ezi mveliso zilandelayo zithengisiwe eAlberta naseBritish Columbia kwaye zinokuhanjiswa kwamanye amaphondo nakwimimandla.
Ulonwabo lweVeggie World Vege Inkukhu yebele 4 PC 131218 Zonke iikhowudi apho iqanda lingabhengezwanga kwileyibhile
Vegefarm I-Vege Stewed chunk 3000 g 4 713224 372285 Zonke iikhowudi apho iqanda lingabhengezwanga kwileyibhile
Jonga ukuba unazo na iimveliso ezikhunjulwayo ekhayeni lakho. Iimveliso ezikhunjulwayo kufuneka zilahlwe ngaphandle okanye zibuyiselwe evenkileni apho bezithengiwe khona.
Ukuba une allergies kwiqanda, sukuyitya imveliso oyikhumbulayo njengoko inokubangela ukusabela okungathandekiyo okanye okusongela ubomi.
Oku kukhumbula kubangelwe yinkampani. I-CFIA iqhuba uphando ngokhuseleko lokutya, enokuthi ikhokelele ekukhunjweni kwezinye iimveliso. Ukuba ezinye iimveliso ezinobungozi obukhulu ziyakhunjulwa, i-CFIA iya kwazisa uluntu ngohlaziyo oluLumkisayo lokutya.
Khange kubekho mpendulo zichaziweyo ezinxulumene nokusetyenziswa kwezi mveliso.